Ifulethi elithambileyo elinendawo yokupaka
Yindlu yabucala etofotofo kwisakhiwo sosapho. Inegumbi lokuhlala eliphangaleleyo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela elikhulu, iibhalkhoni ezimbini, ukufikelela kwi-intanethi simahla kunye nendawo yokupaka yasimahla. Ifikeleleka ngokulula kuzo zonke iindawo zaseSitia.
Indawo yokuhlala ikufuphi nombindi wesixeko. Isixeko sakhiwe ngokwe-amphitheatrically kwaye igumbi likuvumela ukuba ube nembono entle kakhulu kuso sonke isixeko. Kukhululekile ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezintlanu. Ikunika ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo apho ungalungiselela khona ukutya kwakho, amagumbi okulala axhotyiswe ngokupheleleyo anamashiti ebhedi kunye negumbi lokuhlambela elixhotyiswe ngokupheleleyo elineetawuli. Okokugqibela, ebumelwaneni unokufumana iimarike ezincinci ezintathu, iivenkile ezimbini zekofu zesintu kunye nevenkile yenyama.
Bathi le nxalenye yeKrete, kwicala elingasempuma lesi siqithi, yahlukile, yomelele kwaye iyinyani. Ngumhlaba owanika indawo yokusabela kuma-Eteocretans amandulo, amaMinoans okwenyaniso, awayezifihle kwimfazwe yamaDorians. Lo ngumhlaba owazala isithethe sombongo "Erotokritos". Ifilosofi ekhethekileyo yobomi esekelwe kuvuyo lothando, umthendeleko, ububele, ukuvuleka kwentliziyo, "ubuhlanya" obumnandi kunye nomoya ongapheliyo wokuhlekisa abantu basemzini ngolwimi oluqhumayo kunye nemifanekiso. Apha, kwikomkhulu elithandekayo lempuma yeLasithi kunye nendawo yokuzalwa yembongi eyaziwayo yaseCretan ye-Renaissance, uVitsentzos Kornaros, ufihla ubuso obufihlakeleyo nobungaziwa baseKrete.
I-Amphitheatrically eyakhiwe malunga nebhayi entle kumantla-mpuma weKrete, eyona dolophu inkulu esempuma yeKrete inika undwendwe nge-serine kunye nomoya wothando.
Eyona ndawo inomtsalane kwesi sixeko, iKazarma okanye iCasa di Arma, inqaba entle yaseVenice ngenkulungwane ye-13, imi yomelele kwithambeka njengobungqina bozuko lwesi sixeko kumaxesha aphakathi. Imyuziyam ekhethekileyo ye-Archaeological Museum, i-arc yembali yeSitias ukusuka kwimpucuko yamaMinoan ukuya kwixesha lamaGrike namaRoma ligcina ubuncwane obungenakubalwa. Eyona nto ibalaseleyo kule myuziyam ngumfanekiso oqingqiweyo ogqwesileyo we-chryselephantine weMinoan Palaikastro Kouros. Intliziyo yesixeko ibetha kwizibuko kunye nentanga entle egangathiweyo enemithi yesundu emide apho abahlali kunye neendwendwe bathanda ukuhambahamba, ecaleni kweendawo zokutyela zesintu, iicafes ezidlamkileyo kunye nee-pubs.
Ukusuka apha, zonke iindlela zikhokelela kwihlathi lesundu elingaqhelekanga laseVai, ekuphela kwehlathi elilolo hlobo eYurophu kunye nenye yezona ndawo zidumileyo eKrete. Imbonakalo engalindelekanga ye-oasis yase-Afrika ecaleni kolwandle lwegolide. Emantla, ejongene namanzi e-emerald yase-Erimoupoli, kumi amabhodlo ekoloni yaseFenike i-Itanos, echaza imihla yozuko nobungangamsha kwesinye sezixeko ezinamandla nezityebileyo kwihlabathi lamandulo. Impuma yeSitia, embindini wethafa lomlingo elinezidiliya kunye nemithi yomnquma, kumi iMoni Toplou edumileyo neyomeleleyo, imonki yembali yamaxesha aphakathi kunye nenqaba yenkulungwane ye-14. Iindwendwe ziyamangaliswa bubuchule bokwakha obunomtsalane kunye nelitye elipinki lendawo, ubuncwane obunqabileyo becawa bemyuziyam yeemonki kunye newayini edumileyo.
Siyazi ukuba kubaluleke kangakanani "uNxibelelwano" kubahambi. Ke siya kunxibelelana phambi kokufika kwakho kwaye ngexesha lokuhlala kwakho ukuze sikunike lonke ulwazi oluyimfuneko onokuthi ulufune kwaye uphendule yonke imibuzo yakho. Siza kube silapha ukuze sikwamkele kwindawo yethu kwaye sonwabe kakhulu ukukunceda ngayo yonke into oyifunayo kubandakanya iingcebiso kwezona lwandle zibalaseleyo kunye neendawo zokusingwa, iindawo zokutyela kunye nokuthenga kwakho. Sifuna ukuba ufumanise wonke ummandla wethu omhle kunye nococekileyo onokuthi unikeze. Ngokuqinisekileyo sinokuqinisekisa ukuba sigcina ubumfihlo bakho bukhuselekile kwaye sixhomekeke kuwe.
Siyazi ukuba kubaluleke kangakanani "uNxibelelwano" kubahambi. Ke siya kunxibelelana phambi kokufika kwakho kwaye ngexesha lokuhlala kwakho ukuze sikunike lonke ulwazi oluyimfuneko…